Dagaal culus oo xalay ka dhacay degmada Xudur ee gobalka Bakool
August 16, 2012 - Written by Baydhabo:-Dagaal culus oo aan waxba la iskula harin ayaa xalay waxaa uu ka dhacay degmada Xudur ka dib markii ay weerar culus ku soo qaadeen degmada Xudur ciidamada Al-Shabaab waxaana dagaalka uu sababay khasaaro leh dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalka xalay ayaa socday mudo ku dhow labada saacadood waxaana uu dagaalka ku fiday gudaha degmada Xudur sida ay goobjoogayaal ku sugan Xudur ay u sheegeen warbaahinta ka madax banaan labada dhinac ee xalay ku dagaalamay Degmada Xudur.
Gudoomiye kuxigeenka Gobolka Bakool Maxamuud Cabdi Nuur oo ku sugan degmada Ceelbarde ayaa ku faanay in ay dagaalkii xalay guul ka gaareen ayna iska difaaceen weerar balaaran oo ay soo qaadeen ciidamada Al-Shabaab.
Dhanka kale Sarkaal u hadlay ciidamada Al-Shabaab ayaa sheegay in xalay ay la wareegeen degmada Xudur khasaaro badana ay gaarsiiyeen ciidamada DFKM iyo kuwa Itoobiya.
Dagaal socday muddo ka badan 3saacadood ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Fax-Faxdhuun ee gobolka Gedo waxaana dagaalka qaaday ciidamada Al-Shabaab oo ku suganaa meel aan sidaa uga fogeyn deegaanka Fax-Faxdhuun .
Afhayeen u hadalay ciidamada DFKM oo lagu magacaabo Col. Warfaa Sheekh Aadan ayaa u sheegay idaacad VOA-da in dagaalka ka dhacay Fax-Faxdhuun uu ahaa weerar qorsheysan oo ay soo qaadeen Al-Shabaab wuxuuna sheegay in ay iska difaaceen khasaarana u geysteen.